स्वास्थ्यको विषयमा पत्रकारिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम » Purbihotline
May 25, 2019 पूर्वी हटलाइन	0 Comments
इटहरी । स्वास्थ्यको विषयमा पत्रकारिता अभिमुखीकरण ३ दिने कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
सो अभिमुखीकरण कार्यक्रम बुध बार मोरङको विराटनगरमा सुरु भएको थियो । कार्यक्रमको आयोजना प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको थियो भने नेपाल प्रेस इन्ष्टिच्युट क्षेत्रीय सञ्चार स्रोत केन्द्र विराटनगरले संयोजन गरेको थियो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद दाहालले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदका क्षेत्रमा ३ अर्ब बजेट विनीयोजन गरिएको बताए । तर, यो बजेट कानुन अभावमा खर्च गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । सचिव दाहाल यो रकम खर्च गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन नसकिने जनाए । उनकाअनुसार प्रदेश १ का जिल्ला अस्पतालहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् । यिनै अस्पतालमा सो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र बाझिएकोले बजेट खर्च गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले औषधी खरिदका लागि दिएको पैसा खर्च नभएको उनको भनाइ छ ।
अभिमुखी कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेले प्रदेशमा स्वास्थ्य जिवन कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम निर्देशिका बनाएर पारित भएपछि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । उनले यो कार्यक्रम संचालनका लागि जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श भइरहेको बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टमा रुपमा झापा र मोरङमा सुरु गरिनेछ । बाँकी जिल्लामा क्रमैसंग सुरु गरिने मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य रहन जिवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने–‘रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग नै लाग्न नदिने उपाय अपनाउनु पर्छ ।’ उनले प्रदेश १ का जिल्ला अस्पतालहरुको स्तर उन्नती गरिने बताए ।
मोरङको उर्लाबारीमा ट्रमा सेन्टर संचालन गरिने उनको भनाई छ । साथै इलाम, धनकुटामा सुविधान सम्पन्न शिक्षण अस्पताल संचालन गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको उनले जानकारी दिए । साथै हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लामा आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर संचालन गरिने उनको भनाइ छ ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपाल प्रेस इन्ष्टिच्युट क्षेत्रीय सञ्चार स्रोत केन्द्र विराटनगरका सचिव विरेन्द्र साह, वरिष्ठ पत्रकारहरु मोहन भण्डारी, यज्ञ शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका समाचारका विषयबारे सहभागि पत्रकारलाई बताएका थिए ।
त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाको तर्फबाट केशु काफ्ले , कोसी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. रोशन पोखरेल, विराट मेडिकल कलेजका डा. ज्ञानेन्द्र कार्की, डा. सरोज विशालले सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा मोरङ र सुनसरीका ४० जना पत्रकार सहभागि थिए । सहभागि पत्रकारले शनिबार विराट मेडिकल कलेजको अवलोकनसमेत गरेका छन् ।
← मेस्सीले जिते छैटौं पटक गोल्डेन बुट, रचे किर्तिमान
घुम्ती शिविरमा सेवाग्राही →
June 12, 2019 पूर्वी हटलाइन 0
लागुऔषध गाँजासहित वृद्ध पक्राउ